आमा तिमीलाई यो छोरीको बिन्ती छ। म जन्मिन चाहन्न आमा मलाई नजन्माउ बिन्ती छ। एउटी नारीको रहर, असल र मनोभावना बुझ्ने पुरुषसँग बैबाहिक बन्धनमा बाँधिएर आमा बन्ने। सानासाना भुराभुरीसँग आफ्ना सारा पिडाहरु बिर्सेर रमाउने, खेल्ने र खुसी हुने तर त्यो नारीको रमाइलोपन क्षणिक मात्रै हो रहेछ आमा।
आमा २८० दिनसम्म गर्भमा राख्दा अनि मलाई जन्माउदा तिम्रो प्रसव पिडाको त कुनै शब्दले वर्णन गर्न सकिन्न आमा तर तिम्रो त्यो प्रसव पिडाभन्दा बढि पीडा म धर्तिमा जन्मेको दिन देखि नै झेल्नुपर्ने हुन्छ। भर्खरै भर्खरै हातखुट्टा यताउता फाल्दै, तिम्रो काखमा पल्टेर तिमीसँग आँखा जुधाएर हाँस्ने र बोल्न सिक्ने बेलामा त म ती पापी छोरामान्छेबाट सुरक्षित छैन भने ५, ६,७, हुँदै १२/ १५ बर्ष हुदै परिपक्वतामा डुबुल्की मारेका छोरीहरूको के कुरा गर्नु र आमा। ती दानवरुपी छोरामान्छेसँग बच्नको लागि पौँठाजोरी खेल्ने मसँग कुनै शक्ति छैन आमा किनकि उद्वारा सिर्जित सामाजिक परिबन्दले मलाई कमजोर साबित गरिदिन्छ ।
आमा बिन्ती छ ,मलाई छोरीको रुपमा त्यो धर्तीमा जन्म नदेउ किनभने बतिलैमा टिपेर फ्याक्ने ती नरपिशाच दाजुभाइको अनुहार हेर्ने मलाई पटक्कै मन छैन।
त्यो पुरुष जुन तिम्रो कोखबाट नै जन्म लिने गर्दछ आमा उसले नै तिमी र मजस्ता हरेक छोरीमान्छेको उपभोग गर्दछ, प्यास मेटाउने साधन बनाउँदछ, माध्यम बनाउँदछ भने म जन्मिनुको कुनै अस्तित्व छ र आमा। आमा म आफ्नै बाबाबाट नै बलात्कृत हुन्छु भने अरु छोरामान्छेको कुनै कुरा गर्नै प्रदैन । त्यसैले सुन्दर जीवनको सपना बोकेर जन्मिने म सपना साकार बनाउने पाईला फक्राउन नपाउदै निमोठिन्छु भने म जन्मिनुनै किन पर्यो र ? बरु मलाई भ्रुण पहिचान गरि गर्भमै अन्त्य गरिदिएको ठिक छ आमा। आखिर जन्मेपछि पनि कलिलो अवस्थामा नै चुडिनुपर्छ क्यारे। त्यसैले आमा तिमीले कुनै चिन्ता नगर बरु अब तिमी पनि बाबा जत्तिकै खुसी बन्न सिक र भ्रुण पहिचान गरि हत्या गर्ने प्रक्रियामा बाबालाई सक्रिय रुपमा साथ देउ , सहभागी बन । यो नै तिम्रो लागि पुण्य हुनेछ। केही फरक पर्दैन आमा। जन्म दिएर पनि के गर्छेउ। आखिर तिमीले पनि त बाबाको लागि आफ्नो हजार खुसीको बलिदान दिएकै हौ, नचाहदा नचाहदै पटकपटक बाबाबाट बलात्कृत भएकै हौ यतिमात्र नभएर सामाजिक , धार्मिक विश्वासको कठघरामा उभिएर एउटी छोरीमान्छेले पाउने सजाय बेस्सरी पाएकै हौ । यातना भोगेकै हौ क्यार । यति हुदाहुदै पनि अझै छोरी जन्माउने सपना किन देख्छेउ आमा।
आमा बिन्ती छ ,मलाई छोरीको रुपमा त्यो धर्तीमा जन्म नदेउ किनभने बतिलैमा टिपेर फ्याक्ने ती नरपिशाच दाजुभाइको अनुहार हेर्ने मलाई पटक्कै मन छैन। आमा तिमीले मलाई आफ्नै श्रीमान र छोराबाट त सुरक्षित राख्न सक्दिनौ भने अरुबाट त झन् कुनै आशा नगर किनकि तिमीलाई मेरो सुरक्षाको कुनै अधिकार दिइएको छैन।
धर्तीमा बसेर आकाश छुने सपना नदेख आमा । तिमीलाई बाबाको पुरुषार्थले छेकेर राखेको छ। सानी चुलबुले छोरी ती राक्षस छोरामान्छेहरुको सिकार बन्दा आफ्ना आँशु बगाएर , सरापमा परेर आफुलाई कमजोर बनाउनु भन्दा मलाई जन्म नदिएकै उत्तम हुन्छ। आमा बरु म तिम्रो गर्भमा रहदा तिमीलाई कुनै पिडाको महशुस हुदैन होला। भएपनि आमा बन्ने रहरले सबै चुपचाप सहन्छेउ होला । बिर्सन्छ्यौ होला तर धर्तीमा म आइसकेपछि ती बलवान् छोरामान्छेको कब्जामा परि यौनतृष्णाको साधन बन्दा तिमीलाई खपिनसक्नु पीडा हुन्छ ।
आमा त्यसकारण मलाई जन्माएर पाप काम नगर। बाबाको कठोर नियमलाई छल्दै मलाई जन्म दिएर आफ्नो साथी बनाउने, खेलाउने, दुई चुल्ठो कपाल बाटिदिएर तातेताते गराउदै हातमा समातेर विद्यालय पुर्याउने, ठूलो मान्छे बनाउने र म भित्र आफ्नो खुसीको ठूलो सपना देख्ने , आहा कति मिठो सपना छ आमा तिम्रो । तर ती सपना सपना मात्रै हुन् आमा। ती सपना त तिमीले केही अंश मात्र पूरा गर्न नपाउदै तिम्रा ती कलङक छोराहरुले विलिन बनाईदिन्छन् कुनै ठेगान नै छेैन। तिम्रो आफ्नै सपना र शरीरको त कतिबेला कुन महामुर्ख पुरुषले लुट्ने हो थाहा छैन भने मलाई जन्म दिएर किन दोहोरो पीडाको बोझ बोक्न तयार बन्छ्यौँ आमा।
आमा मैले राम्ररी बुझेकि छु म जन्मनु भनेको ती छोरामान्छेको रुप पाएका दानवको संवेगको साधन बन्नुपर्छ। उनीहरुले जतिबेला चाह्यो त्यतिनै खेर प्रयोग गर्दछन्। अनि आफ्नो प्यास मेटाएपछि मेरो जीवनलिलानै समाप्त गरिदिन्छन्। संवेगको बेला उनीहरुलाई कुनै नाता सम्बन्ध , मान , प्रतिष्ठा ,पद र सृष्टि चलाउने कुरामा होस ख्याल नै हुदैन । त्यसैले फुल्न नपाउदै चुडिनलाई म जन्मिन चाहन्न आमा, बिन्ती छ मलाई जन्माएर पापको भागिनी बन्ने कोशिश नगर। आमा म तिम्रो गर्भमा त सुरक्षित छैन भने त्यो पापी धर्तीमा कसरी सुरक्षित हुन्छुहोला? एकपटक गम्भीरतापूर्वक सोच त । सोच्यौनि हैन त ।
ल अब त्यसो भए छोरीको आमा बन्ने तिम्रो सुनौलो सपनाको दाहसंस्कार गर आमा यसमाथि नै तिम्रो ठुलो भलाई हुनेछ । उत्तेजनाको बखतमा बलात्कार गरिरहदा त्यो छोरीको चीत्कार कुनै पनि छोराहरुले सुन्नेवाला छैनन् । बुझ्नेवाला छैनन् । उनीहरु म मानव हुँ भन्ने कुरा बिर्सेर कुकर्म गरिरहन्छन्। आफुलाई बहादुर सोच्छन् अनि प्यास मेट्न तल्लीन भईरहन्छन्।
यो अवस्थामा उनीहरुलाई कुनै कुराको ख्याल हुदैन भएपनि मतलब गर्दैनन् । त्यसैले पनि आमा म त्यस्ता पापीहरु बस्ने ठाउँमा जन्मिन चाहन्न। तसर्थ मलाई जन्माएर बाबा त बलात्कारी बने बने तर तिमी पनि अपराधी नबन है आमा। फेरि पनि बिन्ती गर्छु आमा , मलाई जन्म नदेऊ है।
आईतबार, कात्तिक २, २०७७, १५:२३:००
#मैले जे देखेँ
नाबालक छोरी अस्तित्व लुटिएर उनको प्राणको हत्या गरि झाडिमा मिल्क्याएको कसरी हेर्न सक्नु भएको छ ? पुरा पढ्नुहोस्